iPhone 12: runyerekupe, kuvhura uye zvese zvatinoziva - iPhone News | IPhone nhau
El iPhone 12, iPhone 12 Pro uye iPhone 12 Pro Max vairova musika pasina shanduko huru padanho rekugadzira kunze kwekudzoreredza mativi eiyo iPhone 5 uye yechina kamera. Uye zvakare, yaizosanganisira kekutanga tsigira 5G kuenderana neazvino kufambira mberi mukubatana kweInternet.
iPhone 12: zuva rekuburitsa uye mutengo
Kunyangwe Apple isina kuburitsa kuvhurwa kusvika nguva pfupi pamberi pechiitiko chehurukuro, kwemakore hurukuro yayo yepamutemo yanga iri munaGunyana wegore rega, kunyanya muvhiki repiri, saka zvinokwanisika kuti gore rino iro zuva rimwe chete richadzokororwa.
Isu tinofanirwa kuziva kuti iyo coronavirus inogona kukanganisa zvese kugadzirwa uye kuratidzwa kweiyo iPhone 12, kunyange hazvo mhedzisiro yayo ichitarisirwa kuve shoma. Kana iri zuva rayo rekuburitsa, hapana shanduko huru dzinotarisirwa zvinoenderana neDigiTimes zvinyorwa.
Saizi yayo inofungidzirwa kuti ichengetwe mu 6,1 inches asi neshanduko kubva kuLCD skrini kuenda kuOLED, ine mwero wekuzorodza waizokwira kubva pa60Hz kusvika pa90Hz kuti uve nekuratidzwa kwakawanda kwemvura.
Tichifunga nezvemutengo wemamodheru apfuura uye trajectory ingangotora iyi modhi nyowani, iyo iPhone 12 inogona kupfuura mitengo ye € 799 yemhando yepamusoro, € 1.000 yeiyo iPhone 12 Pro y € 1.200 yeiyo iPhone 12 Pro Max. Izvo zvinoshandiswa zvinotarisirwa kunge zvichidhura kupfuura zvakapfuura, ndosaka yavo nyowani yakakwira mutengo.
Imwe modhi yakachipa yaitarisirwa pakutanga: iyo iPhone 9 kana SE 2. Inotarisirwa kuunzwa munaKurume kana Kubvumbi 2020.
IPhone 12 dhizaini
Idzi pfungwa dzekupedzisira dzinoenderana nekuvuza uye makuhwa kubheja makamera mana panzvimbo yevatatu veiyo yapfuura modhi, uye mitsetse yakatsetseka izvo zvinotiyeuchidza nezve iPhone 5.
Kana iri notch, mamwe masosi anotengesa pa kuderedzwa kweiyo notch mukutsinhana kwekubaira Chiso ID. Nekudaro, vamwe vaongorori vanopokana kuti ndeimwe yeakanakisa-akavandudzwa matekinoroji nekambani uye kuti zvingave zvine pundutso kusiya chete Kubata ID.
Iyi yechina kamera inofungidzirwa kuti ichave nehukuru hwakanyanya hwekupa kwe3D yezvinhu, zvinobatsira pazvinhu zvakadai seReal Virtual Reality.
Kana iwe uchida kuziva iyo yekupedzisira iPhone 12 uye zvese runyerekupe uye kudonha, unogona kuenderera uchiverenga nhau dzavo pazasi.
Iwe unogona ikozvino kutenga yakagadziridzwa iPhone 12 kana 12 Pro kubva kuApple
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 4 mwedzi .
Sezvamunongoziva mese, ichi ndicho chimwe cheApple webhu zvikamu izvo zvandinowanzoshanyira nguva nenguva ku…
Kugadzirisa chirongwa che iPhone 12 uye 12 Pro nematambudziko ezwi
Iyo Cupertino kambani ichangotanga chirongwa chekugadzirisa kana kutsiva kwemamwe ma iPhone 12 mamodheru uye ...
Kutengesa kweiyo iPhone 12 hakuna kutambura kudzikisira kusati kwatanga iyo iPhone 13
Chikamu chechitatu chegore cheApple hachiwanzo kunaka maererano nekutengesa kwe iPhone, nekuti ...
Madhiri paApple Watch Series 6 GPS + Cellular uye zvimwe zvigadzirwa zveApple
kubudikidza Ignatius Room inoita 11 mwedzi .
Kutenda kune chibvumirano pakati peApple neAmazon kutengesa zvigadzirwa zvavo zvakananga kuburikidza ne e-commerce chikuva ...
Iye zvino unogona kumira neApple Chitoro uye utore MagSafe Battery Pack
kubudikidza Tony Cortes inoita 11 mwedzi .
Zvakanaka, patova neMagSafe mabhatiri eiyo iPhone 12 irimo muzvitoro zveApple. Saka une…
IPhone 12 inoderera zvishoma pane iPhone 11
kubudikidza Tony Cortes inoita 12 mwedzi .
Isu tese tinoziva kuti zvigadzirwa zveApple zvinobata kukosha kwazvo kwemusika zvakamboshandiswa kune…
New MagSafe Battery Inosimbisa iPhone 12 Inotsigira Reverse Wireless Chaja
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 12 mwedzi .
Imwe yenyaya dzatafukidza zvakanyanya mumapodcast edu evhiki nevhiki runyerekupe rwekuti Apple inogona kuunza ...
Apple inotangisa iyo nyowani MagSafe bhatiri!
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 12 mwedzi .
Iyo Cupertino firm ichangoburitsa MagSafe bhatiri yeiyo iPhone 12 iyo inopa mukana wekuchaja ...
Nyowani shambadziro inoratidza iPhone 12 Pro Husiku Mode kutora mifananidzo
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 12 mwedzi .
Kufambira mberi mu iPhone Hardware inobvumira vashandisi kuona zvakanyanya uye nekuwedzera mashandisirwo ekushandisa ...
Iyo iPhone 12 renji inodarika mamirioni zana mayuniti akatengeswa
kubudikidza Ignatius Room inoita 12 mwedzi .
Vakomana vekuCounterpoint Research vakaburitsa mushumo unoti iyo iPhone 12 yakatotengesa ...
Apple inodhinda runyorwa rwezvigadzirwa izvo zvisingafanirwe kusvika pacemaker
Nekuvhurwa kweiyo iPhone 12, vakati wandei vaive varapi vasina kuona nemaziso akanaka kuitwa kwe ...